Pvc Foam Bhodhi Vagadziri & Vatengesi - China PVC Foam Bhodhi Fekitori
18mm PVC bhodhi pepa
Kushambadzira: kudhinda musilika creen, kuvezwa, kuratidza mabhodhi, mwenje bhokisi
Kuvaka upholster: kushongedza mukati nekunze, kuvaka fomu, kupatsanura imba
Fenicha maitiro: fenicha yemukati kana hofisi, kichen uye chimbuzi
Kugadzira mota uye chikepe, upholster incar, ngarava uye ndege.
Maindasitiri ekugadzira: chirongwa cheantisepsis uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, firiji, chikamu chinopisa.
yepamusoro foamex PVC bhodhi
Wood mapurasitiki ematongerwo bhodhi iri mhando nyowani yezvinhu zvinoumbwa izvo zvinokudziridzwa mumakore achangopfuura kumba nekune dzimwe nyika.
Kupfuura 35% - 70% yeupfu hwehuni, husk yemupunga, mashanga uye imwe tsvina yemichero yemarara yakasanganiswa muzvinhu zvitsva zvehuni, zvobva zvadhonzwa, kuumbwa, jekiseni rakaumbwa uye mamwe matekiniki ekugadzira epurasitiki anoshandiswa kugadzira mahwendefa kana profiles. Inonyanya kushandiswa muzvivakwa, fenicha, kugadzirisa zvinhu uye mamwe maindasitiri. Inodaidzwa kuti yakadururwa huni mapurasitiki ematongerwo ebhodhi ayo epurasitiki nehupfu hwehuni zvakasanganiswa mune chimwe chikamu zvobva zvaumbwa neyakaipisa extrusion.
Nhema PVC Bhodhi
PVC furo bhodhi chinhu chakaomarara asi chakareruka zvinhu zvinowanzo shandiswa muPOP kuratidza, signage, kuratidza mabhodhi uye asiri-anotakura-anotakura mafomu. Nekuda kweyakagadzika maseru maseru, iyo yakanaka substrate yekudhinda kwedhijitari, kudhinda kwescreen, kupenda, laminating uye kunyora vinyl.
chena PVC furo bhodhi
Chena PVC furo bhodhi iri yemhando yepamusoro mhando, yakanyanyisa kuita PVC furo bhodhi / jira. Inowanikwa chena, inozivikanwa kwazvo mumusika wepasi rose, iri mumatte uye inopenya mukupera kwakasarudzwa. Iine yakanakisa UV kuramba panze.